Bangiyada Dibadda Xiliga 3: Taariikhda Siideynta: La joojiyay ama la cusboonaysiiyay? - Wararka Ugu Sareeya
Bangiyada Dibadda Xiliga 3: Taariikhda Siideynta: La joojiyay ama la cusboonaysiiyay?
Bangiyada Dibadda Xiliga 3 Taariikhda Siideynta
Bangiyada Dibadda Xiliga 3 Shirqoolkii
Bangiyada Dibadda Xiliga 3 Trailer
Bangiyada Dibadda Xiliga 3 Jilayaasha
Riwaayadda da'yarta ee dahsoon ee Outer Banks, koox dhalinyaro ah oo North Carolina ah oo shaqeeya oo loo yaqaan The Pogues waxaa ku xiga Josh Pate, Jonas Pate, iyo Shannon Burke. Waxay bilaabeen ugaarsi hantiyeed iyagoo sameynaya baaritaankooda ku saabsan waayida aabaha John B, sida lagu arkay dhacdadan.
Big John , John B aabbihiis, wuxuu noqdaa mid ku dhex jira ugaarsiga hantida iyadoo Pogues ay la halgamayaan kala duwanaansho dhaqaale oo cad oo ka jirta aagga taas oo ka dhalatay hantida dadka deggan xagaaga iyo saameynta. Wiilkiisa iyo asxaabtiisa ayaa raacay wadadiisa.
Ka dib markii la soo bandhigay Abriil 15, 2020, filimku wuxuu helay faallooyin wanaagsan oo ka yimid kuwa dhaleeceeyay kuwaas oo ammaanay sawirka cajiibka ah ee filimka iyo sidoo kale sheekadiisa xiisaha leh.
Intaa waxaa dheer, faallooyinka bulshada ee ku saabsan sinnaan la'aanta dhaqaalaha iyo dhaqanka ee Bangiyada ayaa la gaarsiiyay dhagaystayaasha. Xilligii labaad ayaa ku soo xirmay waxyaabo naxdin leh iyo su'aalo cusub oo ku saabsan halka uu ku sugan yahay Big John.
Kadib dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2, taas oo ka dhigtay taageereyaasha xaalad gaalnimo, maxaan ka ognahay xilli ciyaareedka saddexaad ee soo socda ee Bangiyada Dibadda?
Sidoo kale akhri: Harley Quinn Xiliga 3- Taariikhda Siideynta Macquulka ah & Xaalada Cusboonaysiinta ee 2022!
Tani waxay ka timid Poguelandia…
Bangiyada dibadda ayaa soo laaban doona xilli saddexaad! pic.twitter.com/NV9Oy4Z8V1
- Netflix (@netflix) December 7, 2021
Bangiyada dibadda ayaa soo laaban doona xilli saddexaad, sida laga soo xigtay Netflix . Sida laga soo xigtay jilayaasha jilayaasha bandhigga muuqaal fiidiyow ah oo lagu wadaagay adeegga baahinta akoontiga rasmiga ah ee Twitter, From Poguelandia, season three, baby!
Xilliga saddexaad ee bangiyada dibadda ayaa laga heli doonaa Netflix ka hor dhammaadka sanadka, marka loo eego qiyaastayada ugu fiican.
Hal sano iyo badh ka dib markii xilli laga sii daayay Netflix Abril 2020, xilli labaad ayaa la soo bandhigi doonaa Luulyo 2021, dib u dhac hal sano iyo saddex bilood ah oo laga bilaabo taariikhda siideynta xilli-koowaad.
Duubista xilliga labaad waxay bilaabatay Ogosto 2020 waxayna dhammaatay Abriil 2021, sida ay sheegtay shabakadu. Marka la eego muddada wax-soo-saarka siddeedda bilood ah iyo suurtagalnimada dib u dhacyada COVID-19 awgeed, marka ugu horreysa ee aan ku arki karno Bangiyada Dibadda ee telefishinnadayada waxay ahaan doontaa Luulyo 2022.
Iska horimaad maskaxi kac ah ayaa keenaya Xiliga 2 inuu xidhmo qaybta u danbeysa ee Bangiyada Dibadda. Ward wuxuu u sheegay Sarah inuu weli nool yahay oo dhimashadiisa loo malaynayo inay ahayd khiyaano si loo hubiyo badbaadada xubnaha qoyskiisa.
Sarah iyo John B waxaa weheliya saaxiibada John B ee hadafkooda ah inay ka soo kabtaan Cross of St. Dominic ee Camerons. Ka dib qalalaasaha ka dhashay, Pogues waxay isku arkaan inay ku xayiran yihiin jasiirad. Mid ka mid ah muujinta ugu muhiimsan ee Xilliga 2 waa in Big John uu weli nool yahay oo ku fiican yahay Barbados iyo inuu sii waday xiriirka Carla.
Muujinaya Pogues oo isku dayaya inay ku noqdaan ugaarsigooda qaaliga ah, xilli ciyaareedkii saddexaad ee bandhigga ayaa lagu wadaa in la soo bandhigo toddobaadyada soo socda. Si ay u soo ceshadaan dahabka iyo iskutallaabta, waxay ku qasbanaan doonaan inay la dagaallamaan Cameron.
Sidoo kale akhri: Xilligii Fargo ee 5: Ma la joojiyay mise waxaa cusboonaysiiyay Netflix?
Marka la eego xaqiiqda ah in Big John uu weli nool yahay, waxaa suurtogal ah in ugaarsiga hantida uu qaato waddo ka duwan, laga yaabo inuu ku lug yeesho iskaashiga dhalinyarada. Sida laga soo xigtay hal-abuurayaasha bandhigga, qarsoodiga ku hareeraysan hantida ayaa noqon doona mid aad u dhib badan xilliga saddexaad ee bandhigga.
Waxaan sidoo kale arki karnaa koror weyn oo ku yimid tirada jacaylka dhalinyarada ee sheekada. Wareysi lala yeeshay toddobaadlaha madadaalada ee la daabacay horraantii bishan, Josh Pate wuxuu bixiyay muuqaal qarsoodi ah oo ku saabsan waxa soo socda. Marka la eego JJ iyo Ki, waxaan si cad u garanaynaa sida ay taageerayaashu u dareemayaan iyaga. Waxaan xiisaynnay inaan wax badan ka ogaanno xiriirka Ki-Pope.
Waxaan rabnay inaan bixinno horudhac sir ah oo ku saabsan waxa iman doona xilli ciyaareedka saddexaad. Waxaan la yaabnay tan, gaar ahaan marka la tixgeliyo inta ay dadweynuhu u xididayaan xiriirka JJ iyo Kiara, Josh ayaa sii waday. In kasta oo aynaan rabin inaan isla markiiba samayno, waxaan dareemaynaa inaan ku qasbanahay inaan sidaas samayno sababtoo ah waxay nagu qabatay yaab.
Waxaan u maleynayaa inay ammaan tahay in la yiraahdo waxaan filan karnaa safarka saddexaad ee Pogues inuu noqdo mid kasta oo madadaalo leh sidii labadii hore.
Soo saarida trailer-ka waa, nasiib darro, ma aha mid macquul ah wakhtigan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad calaamadayso shabakadeena, waxaanu ku ogeysiin doonaa isla marka aanu ogaano wax ku cusub xaalada. Nimanyahow, waxaad heli doontaa faa'iidooyinka samirkaaga waqtigeeda!
Sidoo kale akhri: Xiliga Hightown 3: Taariikhda Siideynta La Xaqiijiyay, Trailer & Waxkasta oo aan Naqaano 2022!
In kasta oo kabka Outer Banks xilli 3 uusan weli muujin Netflix, waxaan horeyba u ognahay cidda wax badan ku soo laaban doonta. Hoos ka eeg jilayaasha xilli ciyaareedka 3 ee Bangiyada Dibadda:
Taasi waa waxa aan ka naqaano Bananka Dibadda Xiliga 3. La soco wixii ku soo kordha ee rasmiga ah waana ku mahadsan tahay akhrinta!
Walaalaha Dhiiga: Malcolm X iyo Muxammad Cali: Dammaanad Cagaaran ah
Luke Combs Qiyaasta Shabakadda Shabakadda Waa $1 Milyan (La cusbooneysiiyay 2022)!
hulu iska soo gal guriga
websaydhka filimada bilaashka ah ee khadka tooska ah lama soo dejisto
gidaarka filimka bilaashka ah ee internetka
sida muusigga loogu daro roblox
shabakadaha waa inaad booqataa maalin kasta